Maxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Labradoodle-ka Australia - Taranka
Waxaa jira nooc kale oo naqshadeeye ah oo magaalada ka jira oo u qalma buunbuunin - Labradoodle-ka Australia!
Laakiin doodo badan oo ka jira adduunka bakhaarka, eeyaha jecel waa inay ka feejignaadaan noocyada! Marka ka hor intaadan ku darin Labradoodle Australian ah qayb ka mid ah qoyskaaga, qaado waqti aad wax kaga barato iyaga.
Sii wad aqrinta tusaheena si aad u ogaato inay tani kugu habboon tahay adiga.
Asal ahaan: Taariikhda Labradoodle ee Australia
Muxuu u egyahay Labradoodle-ka Australia?
Astaamaha iyo Shakhsiyadda Labradoodle ee Australia
Sida Loo Daryeelo Labradoodle Australia ah
Labradoodle-ka Australia ma yahay Ey Caafimaad qaba?
Xagee Ka Iibsan Karaa ama Kori karaa Labradoodle Australia ah?
Naadiyada Gaarka ah ee Diirada Saaray Labradoodles-ka Australia
Isbarbar dhiga Labradoodle-ka Australia iyo Doodle kale
Maxay Tahay Inaan Iibsado Labradoodle Australia Ah?
Way fududahay in la yiraahdo Aussie Labradoodle waa isku mid Heerka Labradoodle . Taasi waxay ku kala duwan yihiin oo keli ah waxaad ku dartay meesha ay ka timid. Laakiin ma ahan wax fudud.
Taasi waa sababta aan si qoto dheer ugu sii qodon doonno waxa taranka ka kooban cutkan!
Dhammaantood waxay bilaabeen 1989 markii haweeney indhoole ah ay u baahan tahay eey adeeg ah. Dhibaatadu waxay tahay, ninkeeda ayaa xasaasiyad ku leh eeyaha.
Wally Conron , ah Maareeyaha Taranka ee Adeegyada Eyga Tilmaamaha Australia gudaheeda, waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan sameynta canine leh dabeecad dhammaystiran ee ey adeeg ah iyo a hypoallergenic jaakad
Wuxuu isku daray laba eey oo saafi ah oo sifada ku habboon. Wuxuu xushay shaqadii dadaalka badnayd Labrador dib u habeyn iyo Heerka aan daadin Poodle . Sidaa awgeed magaca Labrador-Poodle ama Labradoodle .
Guushaas kadib, Wally Conron wuxuu rabay inuu sii horumariyo taranka.
Awstaraaliya Tegan Park iyo Rutland Manor waxaa ku caawiyay sii wadista wixii Wally bilaabay. Waxay sii wadeen taranka Labradoodles si ay u soo saaraan eeyo leh jaakad isku mid ah, dabeecad, iyo isku ekaysiin.
Si aan u fahanno sida horumariyayaashu ugu suurtagashay inay abuuraan tayada is-waafaqsan ee noocyadan, waxaan u baahanahay inaan ka wada hadalno sida loo sameeyay Australian Labradoodle.
Maxaa Sameeya Labradoodle Australia ah?
Australian Labradoodle ayaa loo kala saari karaa sida haddii mid ka mid ah shuruudaha 2 la buuxiyo:
Taranka Labradoodle wuxuu gaadhay Jiilkii 5aad
Isirka eygu wuxuu ka kooban yahay Labrador, Poodle, iyo American Cocker Spaniel
Si ka duwan noocyada kale ee isweydaarsiga ee leh laba waalid oo kala duwan, Aussie Labradoodle waxay ka koobnaan kartaa saddex nooc, ama waxay noqon kartaa natiijada taranka joogtada ah ee Labradoodles.
Taranka joogtada ah macnaheedu waa inaad ka gudubto laba Labradoodles oo labadoodaba leh waalid Labradoodle sidoo kale. Marka eyda ay soo saareen ay si buuxda u koraan, samee hawshaas shan jeer (5 fac), adiguna waad heli doontaa Australian Labradoodle , isweydaarsi isirro badan. Taasi waa sida ay markii hore u soo saareen tarankaan.
Hadana haddii aad u maleyneyso inay taasi ku filan tahay taranka si loo sameeyo eeygan cajiibka ah, ururada soo saaraya Labradoodle-ka Australia halkaas kuma joogsan. Waxay ogaayeen inay ku heli karaan astaamo badan oo togan noocyada si ay uga dhigaan mid kaamil ah!
Si taas loo sameeyo, iyagu si taxaddar leh loogu daray taranka kale khadadka Labradoodle ee lahaa soo qaado sifooyin aad looga jecel yahay , eeyahaasina waa:
Ka Faa'iidaysiga Coat Coat
Ku dar iyaga, oo ay ku jiraan Labrador iyo Poodle, ka dibna Aussie Labradoodle ayaa leh wadar ahaan 6 suuragal waalidnimo .
Dhammaan noocyada waalidku waxay lahaayeen wax ay miiska keenaan, laakiin kan iskudhafka ugu badan loo adeegsaday sameynta Labradoodle-ka Australia waa Poodle, Labrador Retriever, iyo Cocker Spaniel Mareykan ah.
Soosaarayaasha noocani waxay badanaaba isticmaali jireen American Cocker Spaniel maxaa yeelay wuxuu ahaa eeygii ugu dambeeyay ee ay ku dareen Labradoodle-ka Australia, waxayna arkeen inuu keenayo astaamo ka sii dabacsan eeyaha kale.
Marka bal aan guda galno oo aan ka munaaqashoodno astaamaha is-waafaqsan ee Doodle-kan quruxda badan.
Waa odhaah guud oo ah muuqaalku maahan wax walba , laakiin tan iyo markii aan u janjeersano xaqiiqda ah in Labradoodles-ka Australia ay kaliya qumman yihiin, muuqooda ayaa dhameystiri doona liistadaada hubinta.
Waxay u eg yihiin xayawaanno cufan oo la jecel yahay indho waaweyn oo wareegsan, madow oo madow taasi waxay kugu kalifaysaa inaad jacayl gasho! Qaar iyaga ka mid ah xitaa waxay leeyihiin midabbo indhaha ah oo u dhexeyn kara ambaar madow illaa indhaha cirro cagaaran. Waxayna leeyihiin a san weyn oo afar gees leh .
Midabka sanka ee 'Australian Labradoodle' midkood wuxuu noqon karaa mid madow, midab ubax leh, ama midab casaan / casaan leh, laakiin way ku kala duwanaan doontaa iyadoo ku xiran hadba midabka jaakadooda.
Aussie Labradoodles waxay leedahay a laba jibbaaran, dhismo xarago leh , oo waxay leedahay dabada la socota khariidadda marka la socdo laakiin waa inaysan gebi ahaanba dhabarka u laaban.
Immisa Ayuu Yahay Labradoodle Ustaraaliya?
Meel kasta oo aad ku nooshahay iyo inta ay le’eg tahay ama u yartahay booskaagu, waad nasiib badan tahay! Tan iyo waalidkii Poodle wuxuu ku yimaadaa saddex cabbir , sidoo kale Aussie Labradoodle. All inaad sameyso waa soo qaado!
Heer cabbirka Labradoodles Australia dhererkoodu waa 21 ilaa 24 inji (53 illaa 61 cm) culeyskooduna waa qiyaastii 45 ilaa 77 rodol (20 ilaa 35 kg).
Dhexdhexaad Labradoodles Australia dhererkoodu yahay 17 ilaa 20 inji (43 ilaa 51 cm) culeyskooduna waa 30 ilaa 45 rodol (14 ilaa 20 kg).
Muuqaallo yaryar waa kuwa ugu qurxan! Dhererkoodu waa 14 ilaa 16 inji (36 ilaa 41 cm) culeyskooduna waa qiyaastii 15 ilaa 30 rodol (7 ilaa 14 kg).
Waa inaad maskaxda ku haysaa taas labku badanaa ka weyn eeyaha dhadig . Laakiin isbarbardhig wanaagsan, halkan waxaa ku yaal jaantus muujinaya cabirka Labradoodle-ka Australia markii uu si buuxda u koray:
SHAXDA SIZE Dhererka Miisaanka
21 ilaa 24 inji
(53 illaa 61 cm)
45 illaa 77 rodol
(20 ilaa 35 kg)
Dhexdhexaad Australian Labradoodle
17 illaa 20 inji
(43 illaa 51 cm)
30 illaa 45 rodol
(14 illaa 20 kg)
Gunta yar Australian Labradoodle
14 ilaa 16 inji
(36 illaa 41 cm)
15 ilaa 30 rodol
(7 ilaa 14 kg)
Maaddaama lagu heli karo saddex cabbir, an guri dabaq ah ama a guri leh deyr dhexdhexaad ah noqon lahaa ku filan oo ku habboon in ay ka farxiso eey this. Waxa muhiimka ah waa inay helaan qiyaasta maalinlaha ah ee jimicsiga jirka iyo maskaxda.
Koodhka Labradoodle ee Australia iyo Midabka
Waan ognahay in duufaankan qalafsan uu u eg yahay musharax saaxiibka koolkoolinta ah, laakiin ma ogtahay inay leedahay saddex nooc oo jubbado ah ?
Dufan-textured: Kuwani waa jilicsan jilicsan oo waxay u dhexeyn karaan dhogor toosan ama furan ilaa mid ruxruxa.
Suufka-qoraalka: Waxay la mid tahay dhogorta wanka oo leh suuf u eg taabashada. Waxay u egtahay Poodle laakiin waxay leedahay leexasho dabacsan oo si fudud ugu furan maqaarka.
Nooca timaha-jaakada: Ha ahaato mid toosan ama wax yar ruxruxaysa, nooca timuhu waa mid aan ku habboonayn dareenka oo laga yaabo inuu leeyahay urka eygaas. Xitaa haddii aad doorbideyso Doodle-kaaga inuu noqdo mid timo gaaban ama dhaadheer leh, noocaani waa jaakad dayactir oo hooseysa waxayna leedahay heerar kala duwan oo daadinta ah.
Aussie Labradoodles sidoo kale waxay soo galaan a midabbo kala duwan , sida parti, cadaan, abrikot, shukulaato, madow, meeris, iyo inbadan!
Haddii aad go'aansato inaad hesho eey yar oo 'Labradoodle Australian' ah, ha la yaabin haddii uu isagu leeyahay midabka jaakad isbeddela. Way madoobaaneysaa ama way libdhi doontaa markuu bislaado.
Qabaya Coat-ka 'Hypoallergenic Coat' ee Aussie Labradoodle
Nooc kasta ha lahaadee dharkaaga Labradoodle ee Australia leedahay, horta is weydii: “ Muuqaal noocee ah ayaan rabaa eeygu inuu yeesho? 'Iyo' Mudo intee le'eg ayaan rabaa inuu jubbadiisa noqdo? ”.
Tan iyo markii jaakada Australian Labradoodle si joogto ah loo soo saaray 35kii sano ee la soo dhaafay, iyagu waa ka fog helitaanka astaamaha daadinta ee Labrador ah.
Laakiin inkasta oo ay yihiin nooc aan daadin, haddana weli way u baahan yihiin is qurxin joogto ah.
Waad cadayan kartaa jaakadda Doodle laba jeer usbuucii si looga hortago isku dheelitirka, iyo sidoo kale inuu dhogortiisa caafimaad iyo nadiif ahaado. Haddii eeygaagu inta badan ku jiro gudaha guriga, cadayashada dhawrkii maalmoodba mar iyo mar mar qubeys ayaa ku filnaan lahaa.
Kulamada caruurnimada waxay sidoo kale u noqon kartaa waqti isku xirnaanta adiga iyo eeygaaga, laakiin haddii aad ogtahay inaad u baahan tahay caawimaad xirfad leh, xusuusnow u kaxee ninka hagaajiya 2 ilaa 3dii biloodba mar si aad u haysato jaakad si sahlan loo ilaalin karo.
Haddii ay dhacdo inaad isweydiiso, muuqaalka shagagga waa mid ka mid ah timo-jaraha ugu caansan ama raadso Labradoodles-ka Australia.
Inta aan ku jirno mowduuca hagaajinta, ha ilaawin inaad ciddiyahaaga ka jarto cidiyahaaga Australia Labradoodle laba ilaa afar toddobaad oo uu cadaydo ilkaha bille ah . Dhegaha, samee bil kasta baar oo ka bixi timaha gudaha si joogto ah si aad uga fogaato infekshinka sababo la xiriira hawo la'aan.
Waa kuwan fiidiyow muujinaya ALAACA alaabooyinka Australia ee aasaasiga ah ee qurxinta:
Gacmaha hoos, eeyaha oo dhan waa cajiib! Laakiin ma ogtahay in Jiilka Koowaad Labradoodle uu u muuqdo inuu yahay hyperactive badan? Labradoodles-ka Australia way ka fog yihiin intaas. Waxay kala yihiin deji , dheellitiran , dareen leh , iyo bislaaday . Laakiin iyagu weli waa aad u xiiso badan in la joogo, haddii ay tahay ciyaarta gudaha ama dibedda!
Waxa kale oo jira sabab aad u maqasho una akhrido waxyaabo badan oo wanaagsan oo ku saabsan tarankaan, waana sababta oo ah astaamaha wanaagsan ee ay ka heshay waalidkeed.
Sida Poodle, Australian Labradoodles waa aad u caqli badan, dhaqaaqa, oo saaxiibtinimo leh . Iyagu waa farxad in lala joogo maxaa yeelay way qurux badnaan karaan majaajilo ah mararka qaarkood!
Noocan ayaa sidoo kale noqon lahaa u fiican qoysaska carruurta leh. Kaliya iska hubi inaad kormeerto carruurtaada yar yar markasta oo ay joogaan hareeraha eygaaga ama 'Mini Australian Labradoodle' si aad uga fogaato dhaawacyada.
Taas ka sokow, Aussie Labradoodles waa daacad , fiican eeyaha kale iyo xayawaanka guriga , kama baqaan inaad muujiso kalgacalkooda iyo u heellan, waana hage weyn iyo eeyaha daaweynta - sida labrador Retriever iyo waalidkood reer Spain.
Iyaga oo dhan waxay bixin karaan, sidee u muujisaa eeygaaga inaad jeceshahay iyaga? Daryeelka saxda ah, dabcan!
Immisa jimicsi ayuu u baahan yahay Labradoodle Australia ah
In kasta oo noocani uu ku habboon yahay dhammaan noocyada guryaha, eeygaagu weli wuxuu u baahan yahay jimicsi si uu u sii daayo tamartiisa ka soo baxda wakhtigaas oo dhan ee uu ku qaatay gudaha.
Haddii Aussie Labradoodle ay caajiso, aan loo baahnayn dabeecadaha horumariyo. Waxa aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad isaga ku faraxdid adoo siinaya waxqabadyo badan oo maskax iyo jimicsi maalinle ah.
Labradoodle-ka Australia wuxuu leeyahay heer tamar hooseeya ama dhexdhexaad ah, marka a 30 ilaa 40-daqiiqo socod maalinle ah ayaa kugu filnaan lahaa.
Marka laga reebo socodka, waxaad sidoo kale u qaadan kartaa eygaaga inuu ku boodboodo, orod, socodka, ama, haddii ay tahay hiwaayaddaada, xitaa ugaarsiga! Labradoodles Australia jecel biyaha , sidoo kale. Haddii aad leedahay barkad, ama haddii aad ku nooshahay haro ama xeebta agteeda, u soo kaxee, oo waxaad arki lahayd isagoo istuuraya si uu u buuxiyo oo u dabaasho.
Haddii aadan haysan waqti aad ku qaadatid eeygaaga socod, deyrka deyrka ku jira ayaa ah goob aad u fiican oo lagu ciyaari karo isaga. Ciyaartan firfircoon waxay si fudud u buuxin kartaa 20 illaa 30 daqiiqo oo ah qadarka jimicsiga loo baahan yahay ee loogu talagalay 'Aussie Labradoodle'.
Marka laga reebo waxqabadyada jireed, Doodle-kaaga ayaa sidoo kale u baahan doona kicin maskaxeed. Marka waxaad siineysaa isaga madadaalada gudaha sida calaalinta, xujada, ama jiilka alaabta lagu ciyaaro caqabad ayuu ku noqon doonaa.
Qaar ka mid ah waxyaabaha caanka ah ee loo yaqaan 'this breed' waa Kong xad-dhaaf ah iyo Dibedda Hound Nina Ottoson Eeyda lebenku Daweeyo Xujo Ey Toy . Inaad siiso Aussie Labradoodle dhawr ikhtiyaar ayaa ka ilaalin doona inuu caajiso, sidoo kale waxay ka jeedin doontaa dareenkiisa inuu ku cuno alaabta guriga ama kabahaaga.
Tababarida Labradoodle Australian ah
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan bakooradani waa inay yihiin caqli iyo fududahay in la tababaro . Waxay ku soo qaadan karaan sharciyadaada iyo tabaha aad u barato isaga oo jooga waqti kooban.
DIGNIIN! Laga bilaabo marka aad gurigaaga keento eeyaha yar yar ee 'Labradoodle' ee Australiyaanka ah, isu muuji inaad tahay hogaamiyaha baakadka guriga ama qoyska. Noocani wuu kaa dheereyn karaa oo wuxuu yeelan karaa dabeecad edebdarro ah haddii aanu korin, la dhexgelin, oo uusan si habboon u tababaran.
Noqo mid adag oo xasilloon alfa oo aad kula dagaallanto arrimahaas habdhaqanka ah jimicsi jireed iyo maskaxeed, waana inaad hubisaa inaad ku dheji jadwalka caadiga ah . Markasta ka dhig casharradaada tababarka inay noqdaan kuwo ku mashquulsan oo wanaagsan. Waxaad ku sameyn kartaa taas adoo adeegsanaya daaweyn, abaalmarin, iyo amaan si aad u dhiirrigeliso eey kasta.
Noqo mid joogto ah oo dulqaad leh . Haddii eeygaaga ama eydaadu aysan awoodin inay raacaan tilmaamaha ama shil galay roogaaga aad ugu jeceshahay, waligaa ha u adeegsan codad ama ereyo qalafsan, oo noqo mid jilicsan. Khibradaha taban weligood waxba tari maayaan.
U fiirso oo dhagayso sida milkiilaha eeygan uu u bixiyo tilmaamo / tabaha fudud isaga oo Teddy ku dhiirrigelinaya daaweyn iyo ammaan.
Aynu u gudubno caafimaadka guud ee noocyadan cajiibka ah maxaa yeelay kaliya maahan inaad quudiso maskaxdaada iyo naftaada saaxiibtinimada canine, laakiin sidoo kale Aussiedoodles baahida jireed.
Labradoodles-ka Australia waxay leeyihiin tayo wanaagsan, laakiin milkiilayaasha eyda ayaa leh mas'uuliyado ka badan intii aygooda u bixin lahaayeen socodka.
Ka sokow in laga dhaxlo dhibaatooyinka caafimaad ee ka iman kara waalidkeed, Aussie Labradoodle waxay ku timaadaa saddex cabbir. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad fiiro gaar ah u leedahay baahiyaha gaarka ah ee Doodle ee aad xulato.
Waxyaabaha fudud sida inaad ka fogaato Mini-kaaga Labradoodle-ka ah inuu ka boodo alaabta guriga ama kor iyo hoos u aado jaranjarooyinka ayaa kaa caawin kara kahortagga dhibaatooyinka wadajirka, ama ogaanshaha inta la siinayo, si uusan u culeys saarin. Ka dib oo dhan, waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid si aad u muujiso sida aad u jeceshahay xayawaankaaga xayawaanka waa adoo daryeela isaga.
Cuntada Ku Haboon Ey Firfircoon Noocan oo kale ah
Dhammaan eeyadu waxay u qalmaan tayo sare leh, noocyo iyo cabir ku habboon si loo hubiyo inay caafimaad qabaan.
Marka kahor intaadan dooran cunto cayiman ama cuntada eyga Aussie Labradoodle-kaaga, weydii dhakhtarkaaga caafimaadka marka hore si aad u hubiso qaddarka cuntada iyo dheelitirka nafaqada.
Sii Australian Labradoodle 2 iyo badh ilaa 3 koob cuntada eyga maalin kasta iyo u kala qaad laba cunto .
Adiga ayay kugu xiran tahay waqtiga aad quudineyso eygaaga, illaa iyo inta uusan gaajo badan qabin oo ay si uun u joogto ah. Waxa milkiilayaasha badankood sameeyaan waxay quudiyaan saaxiibkood dhogorta leh subaxdii iyo hal fiidkii.
Haddii aad doorato cunto guriga lagu sameeyo ama cayriin ama xitaa tayo sare leh cunnooyinka eyga oo heer sare ah , waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad yareyso qadarka cuntada qalalan ee aad siiso saaxiibkaa dhogorta leh si aad isaga ilaaliso inuu buuxiyo.
Haddii Labradoodle-kaaga Australiya uu culus yahay
Eyga eyga ayaa u ekaan kara quruxsan, laakiin waxaad halis gelin doontaa caafimaadka xayawaankaaga. Haddii aad u malaynayso inuu miisaankiisu kordhayo, waxaad maalin walba u qaybin kartaa 2 illaa 3 koob oo ah eeyga cunnadiisa saddex cunto halkii laga isticmaali lahaa labada caadiga ah.
Iyo si kasta oo ay Labradoodle-kaaga Australiyaanka ahi uga dawarsadaan indhahaas jecel, ha siinin haraaga miiska iyo cuntada qashinka ah ee dadka.
Waxyaabaha kale ee aad sameyn kartid si aad uga caawiso inuu miisaankiisu hoos u dhaco waxay isu beddelayaan cunno ey yar oo dufan yar laakiin cunno badan leh.
Waxaa jira cunto badan oo loogu talagalay bakhaarrada ka caawin doona inay lumiyaan rodolkooda inta kala-goysyadooda caafimaad maadaama cayilku saameyn ku yeelan karo dhaqdhaqaaqa eeygaaga.
Sidoo kale waa inaad ku dhegtaa dawaynta eyga taas oo ay ku yartahay kaloriintu. Isku day inaad miro u siiso halkii, sida qaybo yaryar oo tufaax ah ama karootada.
Loogu talagalay Australian Labradoodles oo miisaankoodu hooseeyo
Maaddaama aan haysanno Labradoodles Australian ah oo wax badan cuni kara, waxaa jira eyyo aan lahayn rabitaankaas weyn oo culeyskooduna hooseeyo. Waa suurtagal in Doodle-kaaga uu gubayay tamar badan, laakiin hubi inuu miisaankiisu hoos u dhacayo sababtu ma ahan jirro salka ku haysa.
Haddii uu caafimaad qabo in kasta oo uu khafiif yahay, waxaad ka caawin kartaa saxaradaada inuu miisaan kordho. Waad awoodaa koob kale ku dar cuntada eyga ku jirta cunnadiisa maalinlaha ah. Marka laga bilaabo 2 illaa 3 koob, waxaad ka dhigi kartaa 4 oo waxaad u qaybin kartaa laba ama saddex jeer maalintii.
Waxaad sidoo kale u wareegi kartaa cuntada eeyga oo loogu talagalay eeyo halkii dadka waaweyn.
Waxay macnaheedu tahay inaadan siin eeygaaga koobab badan maxaa yeelay kalooriyada kordhay waa lagama maarmaan si loo hubiyo koritaanka ku filan ee eeyaha.
Il gaar ah ku hay waxa iyo inta ay cunayso Labradoodle-kaaga Australia. Waad habeyn kartaa inta jeer ee xilliyada cuntada iyo tirada cuntada si aad u aragto kuwa shaqeeya. Hubina in xayawaankaaga aad heshid jimicsi badan.
Si loo ogaado haddii Doodle-kaaga uu gaadhay miisaan caafimaad leh oo uu ilaalinayo, waa inuu qaataa baaritaan caafimaad lixdii ilaa laba iyo tobankii biloodba mar si looga fogaado inaad dib ugu noqotid caato ama baruur.
Labradoodle-ka Australia guud ahaan waa nooc caafimaad leh, laakiin cidina ma sii ogaan karto dhammaan welwelka caafimaad ee saameyn kara eeygaaga naqshadeeye ah.
Waxa kaliya ee aan sameyn karno ayaa ah inaan wax ka barano taariikhdan 'Doodle' iyo arrimaha caafimaadka ee suurtogalka ah ee waalidka sidaa darteed waan ka warqabi karnaa iyaga waxaana rajeyneynaa, yareyn karnaa ama xitaa ka fogaan karnaa fursadaha ay xayawaankaaga xayawaanku ku heli karaan wax uun.
Waxyaabaha loo yaqaan 'Crossbreeds' waxay dhaxlaan dhibaatooyinka caafimaad ee ugu caansan ee saameeya waalidkood, iyo qaar ka mid ah kuwa aad ka heli karto Labradoodle-kaaga Australia:
Xusulka iyo Hip Dysplasia
Cudurka Von Willebrand
Sidoo kale waa inaad fiirisaa haddii Labradoodle-kaaga Australiyaanka ahi uu had iyo jeer cuncun iyo xoqonayo, taas oo calaamad u noqon karta inuu leeyahay xasaasiyad.
Mid ka mid ah sababaha suurtagalka ah ee ka dambeeya ayaa ah in Aussiedoodle-kaaga uu xasaasiyad ku yeelan karo qayb gaar ah oo ka mid ah cunnadiisa sida badarka ama digaagga. Kaliya maahan inay u horseedi karto cuncun maqaarka, laakiin sidoo kale arrimaha dheef-shiidka.
Sidoo kale waa inaad tixgelisaa arrimo muhiim ah sida Doodle-kaaga da'da iyo xaaladaha caafimaad . Waxyaabaha sida, tirada cuntada eey eey u baahan tahay way ka duwan tahay inta ay tahay inaad siiso qof weyn oo reer Australian ah Labradoodle.
Waxaad had iyo jeer u wareegi kartaa hypoallergenic cuntada eyga ama dawee Aussiedoodle-kaaga xasaasiyadda ku habboon. Waxay kaa caawin doontaa maaraynta, ma aha oo kaliya jaakaddiisa iyo maqaarkiisa, laakiin sidoo kale caafimaadka dheefshiidka.
Haddii Doodle-gaagu leeyahay dheecaan indhaha ah, daryeel habboon, iyo nadiifinta ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagula tacaali karo. Laakiin haddii ay u muuqato cagaar ama midab kale, ballan ka sameyso dhakhtarkaaga xoolaha si loo hubiyo.
La shaqee oo la tasho dhakhtarka xoolaha ee aad ku kalsoon tahay si aad u ilaaliso dooddaada sida ugu wanaagsan ee aad kari karto oo laga yaabo (faraha faraha) Australian-ka Labradoodle ayaa ka badnaan doona celceliskiisa cimriga 13 ilaa 15 sano !
Hadda markaan baranay xaqiiqooyinka muhiimka ah ama macluumaadka ku saabsan Labradoodle-ka Australia, aan u gudubno halka aad ka heli karto mid.
Marka noocyada isku dhafan ay ku lug leeyihiin, waa inaad si qoto dheer u qoddaa markasta oo aad sameyso baaritaankaaga. Waa inaad taxaddar dheeraad ah muujisaa markaad raadineyso abuure u hoggaansan heerarka diiwaannada iyo kuwa sumcadda leh.
Markaad go'aansato inaad wax iibsato, hubi inaad wax ka iibsaneyso qof aan ka iibsanin eeyaha yaryar ee loo yaqaan 'Labradoodle puppy' ee ka soo baxa miiqyada eyda.
Ma rabi doontid inaad ku lug yeelatid taas oo aad shil u taageerto. Waxaa intaa sii dheer, waxaa jiri doona suurtagal weyn oo ugu dambeyntiina, ay dhibaato ka imaaneyso dabeecadda eygaaga-caqliga u leh ama caafimaadkooda.
Immisa ayey ku kacaysaa Labradoodle Australian ah?
Qashin-qubka Labradoodle ee Australiyaanka ah wuxuu caadi ahaan lahaa celcelis ahaan 8 eeyo, sidaa darteed iyagu runtii ma ahan kuwo dhif ah. Laakiin qaar ka mid ah arrimaha saameynta ku yeelan doona sicirka ayaa noqon doona kuwa soo saara, nasabka, iyo goobta.
Guud ahaan, eeyaha yar yar ee 'Labradoodle' ee Australia ayaa ku kacaya qiyaastii $ 2,700 ilaa $ 3,000 .
Maxay Australian Labradoodles qaali u yihiin?
Kaliya maahan sababta oo ah Labradoodle-ka Australia waa eey naqshadeeye ah, laakiin sidoo kale sababta oo ah keydka taranka .
Haddii soo-saaraha uu adeegsado jiil sare oo Doodle ah isla markaana uu baaritaanno caafimaad oo badan ku sameeyo waalidiinta, macno ayey samaynaysaa in Aussiedoodle-ka uu qaali yahay.
Maaddaama Aussiedoodle aysan ahayn isku-darkaaga celceliska ah, kuwa wax yaqaan ayaa maal galiya waqtigooda, u-hurin, iyo lacag si ay diiradda u saaraan soo saarista eeyga noocan ah.
Taasina waa waxa ka dhigaya Australian Labradoodles inay u qalanto lacagtaada. Waxaad bixin laheyd a wehel tayo sare leh leh sifooyin isdaba-joog ah oo la yaab leh.
Australian Labradoodle Kalkaaliyeyaasha
Haddii aad rabto inaad iibsato Ey Aussie Labradoodle ah, waad iska hubin kartaa xubnayaasha ee Ururka Australian Labradoodle Association of America.
Naadiga Australia Labradoodle Club of America wuxuu ku siinayaa ikhtiyaar inaad ku aragto International, US, iyo Canada xubnaha breeder .
Kuwaas marka laga reebo, halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah kuwa kale ee ku shaqeeya internetka oo diiradda saaraya nooca Labradoodle iyo Australian Labradoodle:
Bunji Australian Labradoodles (Midwest Michigan, Mareykanka)
Waddanka Sare ee Labradoodles (Keene, NH, Mareykanka)
Lomond Hills Labradoodles (Iskotland, Boqortooyada Midowday)
Korsashada ama Rehoming Labradoodles-ka Australia
Haddii aad go'aansatay inaad korsato, samatabbixiso, ama aad dib-u-cusbooneysiiso Australian Labradoodle, waan taageersanahay taas 100%!
Kaliya maheli doontid wehel wehel; waxaad kaloo badbaadinaysaa nolosha eygaas.
U fiirso websaydhkan oo ku siiya fursado badan adiga:
Doodlaha Sonkorta Sonkorta (Amador County, California)
Daisy Hill Labradoodles (Koonfurta Oregon)
Samatabbixinta Doodle Rock (Dallas, Texas)
Hale ee Australia Labradoodles (Bartamaha California)
Waxaan soo sheegnay inay jiraan ururo ama naadiyo si adag uga shaqeynaya sidii loo ilaalin lahaa loona sii wadi lahaa horumarinta khadadka Australia Labradoodle, iyo hubinta in taranka si taxadar leh loo raaco.
Kooxahaasi waxay mudan yihiin in la aqoonsado, waana:
LAA - Ururka Labradoodle ee Australia
IALA - Ururka Caalamiga ah ee Australian Labradoodle
FTAA - Naadiga Australian Labradoodle ee Mareykanka
Waxba Ururka Caalamiga ah ee Australian Labradoodle
ALAEU - Australian Labradoodle Association Yurub
Naadiyadan ayaa sidoo kale darsaya waxa eyda ey u qalanto in loo oggolaado inay si taxaddar leh u soo bandhigaan khadadka la xushay.
Oo tan iyo markii Labradoodle-ka Australia uu yahay isku-dhex-dhexaad ama eey naqshadeeye ah, ayaa Naadiga Kennelka Mareykanka (AKC) ma aqoonsana isirkan, laakiin Dog Registry of America Inc (DRA) ayaa aqoonsan.
Ma waxaad xiiseyneysaa isku darka kale ee Poodle-ka halkaas? Inaad si dhakhso leh ugu fiirsato waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin Labradoodle-ka Australia aad bay u caawinaysaa.
Sidoo kale waa wax fiican in laga barto noocyada kale ee Doodles maxaa yeelay taasi waxay ka dhigan tahay inaad fursado badan heli lahayd haddii aad runtii jeceshahay nooc la soo dhaafay Poodle.
Labradoodle Australian VS Heerka Labradoodle
Farqiga u dhexeeya labadan ayaa ah in Labradoodles qaarkood ay daadiyaan halka Labradoodles-ka Australia aysan sameynin, taas oo ka dhigaysa xulasho caan ah oo dadka leh xasaasiyad .
Labradoodles waa eeyaha qoyska ee wanaagsan laakiin waxay noqon karaan kuwo buuq badan sidaa darteed qof weyn waa inuu kormeeraa markay carruurta ag joogaan.
Haddii isku-darka Labrador-Poodle uusan helin feejignaan iyo jimicsi ku filan, waxay horumarin karaan arrimaha habdhaqanka sida xanaaqa ama calalinta. Labradoodles Australia waa deji , ma shaqeyn doono marka aad caajiso, oo si fudud loo tababaro.
Laakiin Labradoodles aad bey u jecel yihiin oo waa eeyo adeeg weyn leh.
Labradoodle Australia VS Bernedoodles
Bernedoodle eey ( xigasho )
Sida Australia Labradoodles, Bernedoodles deggan yihiin oo jilicsan. Laakiin Bernes wuu madax adkaan karaa inta ay yar yar yihiin, waxaadna filan kartaa in dabeecaddaasi meesha ka baxdo markay bislaadaan.
Bernedoodles sidoo kale waa goofy oo samee an eey qoys fiican , laakiin waxaa laga yaabaa inay dhibaato kala kulmaan inay la socdaan qoys firfircoon maxaa yeelay heerkooda tamar ayaa hooseeya.
Iyagu sidoo kale maaha guryo yaryar oo way ka fogaan karaan shisheeyaha. Taas ka sokow, way fududahay inay socdaan.
Labradoodle Australian VS Goldendoodles
Goldendoodle dhogor badan
Marka laga hadlayo dabeecadda, Goldendoodle waxay xoogaa la mid tahay Labradoodle-ka Australia.
Saaxiibtinimo, bulsho, iyo kalgacal, layaab malahan inay wax weyn u qabtaan hage ahaan, adeeg, ama ey daaweyn ah. Isku darka Dahabiga-Poodle Dahab waa weyn leh carruurta iyo xayawaanka guriga waana fududahay in la tababaro.
Goldendoodles ma fiicnaan doonto haddii aad keligaa ka tagto muddo dheer ama haddii aadan siinin fiiro ku filan.
Adhijir ( xigasho )
The Sheepadoodle waa nooc sidoo kale fudud in la tababaro maxaa yeelay waa dad caqli badan.
Waxay ku fiicnaan lahaayeen qoys carruur leh, laakiin waa inaad kormeertaa.
Eygan ma iloobin astaamihiisii ​​xoolo dhaqashada wuxuuna isku dayi lahaa inuu ku sameeyo asxaabtooda, xitaa wuu karayaa!
Si kastaba ha noqotee, Sheepadoodles way faraxsan yihiin waxayna sameeyaan ilaalin wanaagsan.
Guud ahaan, noocani waa mid hagaagsan maadaama laga yaabo inuu dhaafo dhammaan waxyaabaha ay tahay inaad raadiso markaad raadineyso oo aad dooraneyso eey: dabeecad weyn ama shakhsiyadda, sirdoonka , joogtaynta qaabeynta , iyo jaakad heer sare ah .
Laakiin dabcan, si loo gaaro go'aan, waxaad u baahan doontaa inaad miisaanto faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka lahaanshaha Labradoodle Australia ah.
Doodle-kan ayaa ku habboon guryaha iyo qoysaska badankood, iyo sidoo kale dadka ay ku dhacaan xasaasiyadda - xitaa kuwa doorbida qasan iyo urka ka jira guryahooda.
Noocyada jaakadaha fiican, oo ah dhogorta-iyo nooca dhogorta, waxay u nugul yahiin guntiinno iyo matte. Marka adiga iyo Aussie Labradoodle waxaad u baahan doontaan inaad la qabsataan habka qurxinta.
Iyo eeygan waxay u baahan tahay hawlo maalmeed kala duwan - laga bilaabo socodka ilaa orodka, iyo calaalinta iyo fikirka. Haddii aad had iyo jeer ku maqantahay shaqo darteed ama aad doorbideyso inaad waqtigaaga ku bixiso gudaha, markaa kaniisadan jecel inuu socodka ku jiro adiga maahan.
Isku darka Labradoodle ee Australiya waa nooc caqli badan oo kugula dhaqmi kara adiga oo wata dabeecaddiisa khiyaanada leh. Laakiin tababarka hore iyo cadeynta cidda hogaamiyaha xirmada ayaa Doodle kaaga ogeysiin doonta meeshiisa.
Laakiin guud ahaan, noocani waa kan ugu badan edeb-yar saxaro aad u rajeyn karto
Maxaad u malaynaysaa Labradoodle-ka Australia? Noosoo sheeg wax walba oo ku saabsan sheekooyinkaaga iyo ra'yigaaga ku saabsan Aussie Labradoodles, iyo xitaa wadaagno talooyin ama talo!
Ku wada qor dhammaan faallooyinka hoose oo u oggolow kuwa kale inay wax bartaan ama ay ku dul yaabaan sheekooyinkaaga xayawaanka ah ee qurxoon!
sida loo ogaado nooca eey aad leedahay
dahabi soo celiya iyo adhijir isku darka
Adhijirka Australiyaanka ah ee xuduudka collie blue heeler mix
Ingiriisi hore ee idaha poodle
husky qasan oo dahab sooceliya